laacib » Xiriirka Kubada Cagta Ingariiska Oo Ganaax Lacageed Duldhigay Macalinka Kooxda Chelsea Antonio Conte
Brazil Oo Garaacday Argentina, France Oo Sii Xumeeyay Xaalada Germany Iyo Natiijooyinkii Kulamadii Caalamiga Ahaa Ee Caawa La Ciyaaray.
FT: Muxuu ku dhammaaday kullankii xiisaha badnaa ee France vs Germany!
Waa Kuma Xidiga Aduunka Ugu Fiicani? Paul Scholes Oo Dhexda Ka Soo Galay Dooda Lionel Messi & Cristaino Ronaldo.
HT: Germany oo u muuqda mid boorka iska jafaya! Natiijo sidee ah ayaa lagu kala nastay!
Maxay Ahayeen Saddexdii Kalmadood Ee Uu Harry Kane Ku Jawaabay Markii La Waydiiyay Haddii Uu Real Madrid Ku Biiri Doono?
Xiriirka Kubada Cagta Ingariiska Oo Ganaax Lacageed Duldhigay Macalinka Kooxda Chelsea Antonio Conte
Xiriirka kubada cagta Ingariiska ayaa ganaax lacageed oo gaaraya sideed kun ginni waxa ay duldhigeen tababaraha laacibkii Chelsea Antonio Conte ka dib markii uu qirtay inuu si xun u dhaqmay taasoo keentay casaankii la siiyay kulankii Swansea ay ka badiyeen.
Garsoore Neil Swarbrick ayaa tababaraha Talyaaniga casaan siiyay dhamaadkii qeybtii hore ee kulankii ay Chelsea 1-0 ku badisay ka dib markii uu si carro leh uga jawaab celiyay go’aan garsoore isagoo ku qeyliyay garsooraha afaraad ee ciyaarta.
Conte ayaa durbaba qirtay inuu aqbali doono dacwada lagu soo oogay islamarkaana uu bixin doono lacagta ganaaxa.
“Tababaraha Chelsea Antonio Conte waxaa lagu ganaaxay lacag gaareysa sideed kun ginni ka dib markii uu aqbalay dacwadii ay ku soo xoogtay FA-ga” ayaa lagu yiri warbixin ay soo saartay xiriirka kubada cagta Ingariiska.
“Ganaaxan waxa uu daba socdaa casaankii la siiyay kulankii Swansea City ee 29kii bishii November.”
Conte ayaa raaligelin ka bixiyay sida uu u dhaqmay ka dib ciyaartaas iyadoo Chelsea ay 1-0 ku badisay kulankaas ka dib gool uu u dhaliyay Antonio Rudiger.
“Waxaan arkayay laacibkii naga soo horjeeda oo waqti dhumis sameyneysa, waaan sababta aan dhowr jeer u la hadlay garsooraha afaraad.” ayuu Antonio Conte u sheegay Sky Sports.
“Ma aanan arkeynin xaalada waqti dhumiska oo isbedeleysa, waxaana ku xanaaqay garsooraha afaraad. Sababtaas darteed, waxaa qasab inaan raaligeliyo isaga iyo garsooraha dhexe. Waqtigaas waan careysnaa, laakiin waan ogahay inay tahay wax sah ah inaan iyaga raaligeliyo.
“Inuu go’aanka cadaalad ahaa ma garanayo, laakiin garsooraha go’aanka wuu qaatay, sababtaas darteed waa inaan aqbalno oo ixtiraamno go’aankiisa.
“Ma ahan wax sahlan, mararka qaar inta ciyaarta socoto waxaa jira jahwareer badan, laakiin waxaan qabaa inaad sameyn karto qalad, waana sameeyay.
“Shaqada tababare ma ahan mid sahlan. Shaqadeena waa inaan kursiga keydka joogno oo aan la dhibtoono ciyaartoydeena. Xilli ciyaareedkan waa ay adag tahay marka qaar in xasilooni lagu joogo kursiga keydka.”
HT: Germany oo u muuqda mid boorka iska jafaya! Natiijo sidee ah ayaa lagu kala nastay!October 16, 2018
Maxay Ahayeen Saddexdii Kalmadood Ee Uu Harry Kane Ku Jawaabay Markii La Waydiiyay Haddii Uu Real Madrid Ku Biiri Doono?October 16, 2018
Liverpool oo afar ciyaaryahan kaga soo dhaawacmeen ciyaaraha qaramada iyo Klopp welwel wajahaya!October 16, 2018
Paul Scholes: Waligay Umaan Arkin In Uu Yahay Ciyaartoy Man United Ah, Waxaa Alexis Sanchez Loola Soo Saxiixday In Man City Laga Joojiyo Oo Kaliya.October 16, 2018
Midabka buluugga iyo gaduudka oo qeexi kara xilli ciyaareedka Real Madrid!October 16, 2018